VOVONANA MAMPIRAY : Mitaky ny hamerenana ny “Iles Eparses” amin’ny Malagasy | NewsMada
Tsy nihemotra ny fitakiana ireo Nosy manodidina ny Vovonana Mampiray.
Nandefa taratasy any amin’ny filoham-pirenena vaovaon’ny Frantsay, Emmanuel Macron, ny Vovonana Mampiray, tamin’ny alalan-dRamaroson Arlette. Votoatin’ny fangatahana ny famerenana ireo Nosy malagasy eo ambany vahohoan’ny Frantsay…
Nandefa taratasy tany amin’ny filoham-pirenena Frantsay vaovao, Emmanuel Macron, ny avy eo anivon’ny Vovonana Mampiray, tamin’ny alalan-dRamaroson Arlette, mpitsara iraisam-pirenena teo aloha, ny farany herinandro teo. Votoatin’ny taratasy nalefa, ny fangatahana ny famerenana ireo Nosy malagasy mbola bodoin’ny Frantsay ankehitriny. Anisan’ny teboka iadian’ny Vovonana Mampiray ny hialan’ny tafika Frantsay ao amin’ireo Nosy kely manodidina, izay eo ambany vahohoan’ny firenena frantsay. Tsy levon’ny vavonin’ny Vovonana Mampiray ny tsy fialan’izy ireo ao an-toerana sy ny mbola hitantan’ny Frantsay ireo Nosy manodidina ireo. Emmanuel Macron, filoham-pirenena vaovao frantsay rahateo, efa nilaza nandritra ny fampielezan-keviny tany Frantsa fa “heloka ho an’ny zanak’olombelona ny nataon’ny Frantsay tamin’ireo zanatany tamin’ny vanim-potoana nanjanahan’ny Frantsa an’i Madagasikara sy ireo Afrikanina sasany”.
Voahitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena
Voaporofo amin’izao fibodoan’ny Frantsay amin’ireo Nosy manodidina izao ny fanitsakitsahana ny fiandrianan’ny firenena malagasy. Manantena ny Vovonana Mampiray sy ny Malagasy iray manontolo, amin’ny ankapobeny, fa ho tafiditra ao anatin’ny fanonerana ataon’ny Frantsay amin’izao fitarihan’ny filoham-pirenena vaovao, Emmanuel Macron izao, ny fialan’ny tafika Frantsay amin’ireo Nosy malagasy, mbola bodoin’izy ireo hatramin’izao. Manara-maso ny fivoaran’izany rehetra izany ny olom-pirenena malagasy satria ny fitondram-panjakana tarihin-dRajaonarimampianina Hery moa, sifotra nalan-doha ary mitsaha-ketriketrika tahaka ny sosoa voatapo-drano momba ny fiadiana ireo Nosy malagasy,mbola eo ambany vahohoan’ny Frantsay. Aiza ho aiza ny hambompom-pirenena sy fitiavan-tanidrazana amin’ireo mpitondra fanjakana malagasy?